« I Jesoa natao batemy: tandindon’ny Batemintsika » - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Aoka ny rariny hikoriana... il y a 50 minutes
Iz. 55, 1-11; Sal. Iz. 12; 1Jn. 5, 1-9; Mk. 1, 6b-11
Izao alahady fankalazàna ny nanaovana batemy an’i Jesoa izao no mamarana ny vanim-potoana litorjika fankalazàna ny Noely. Asongadin’ny evanjely, amin’izao alahady batemin’ny Tompo izao, ny fanetren-tenan’i Joany sy Jesoa manatanteraka ny batemim-pibebahana. Asehon’ny evanjely ihany koa ny fankatoavan’Andriamanitra Ray an’i Jesoa ho Zanany sy ny fanosoran’ny Fanahy Masina Azy amin’ny iraka hotontosainy. Santatry ny fanakenen’Andriamanitra Ray ny olombelona mpanota ho zanany raha mibebaka sy manatona Azy amin’ny alalan’i Jesoa Zanany izany.
Ny fanetren-tenan’i Joany : « Izaho manao batemy anareo tamin’ny rano, fa Izy kosa hanao batemy anareo amin’ny Fanahy Masina ». Ambony lavitra noho ny batemy ataon’i Joany ny Batemy hataon’i Jesoa sy ho ampanaoviny ireo mpianany rahatrizay. Ny an’i Joany dia amin’ny rano no anaovany batemy, fa ny an’i Jesoa kosa dia « amin’ny Fanahy Masina ». Ny an’i Joany batemim-pibebahana fa ny an’i Jesoa kosa Batemy fananganana ho zanak’Andriamanitra. Mahatsiaro tena ho kely sy bitika i Joany eo anatrehan’i Jesoa… Tsy mendrika hiondrika hamaha ny fehin-kapany akory aho, hoy i Joany. Izy tsy maintsy mitombo, izaho kosa tsy maintsy mihena, hoy ihany koa izy, nony efa nanomboka nitory teny i Jesoa. Mampitolagaga ny fietren-tena nasehon’i Joany.
Ny fanetren-tenan’i Jesoa : « Dia tonga avy any Nazareta tanànan’i Galilea i Jesoa, ka nataon’i Joany batemy tao Jordany ». Batemim-pibebahana ny batemin’i Joany. Ireo vahoaka voatohin’ny toriteny nataony no manatona Azy ka maneho ny fibebahana amin’ny fiaikena fa mpanota sy amin’ny fitsobohana anaty rano ho mariky ny fidiovana sy fialana amin’ny fahotana. Tsy mba anisan’ireny i Jesoa. Tsy mpanota velively Izy ary tsy mila akory izay batemin’i Joany. Nanandratra ny fanetren-tenan’i Joany anefa i Jesoa. Tsy nanao tsinontsinona ny batemin’i Joany Izy fa nankatò izany. Na dia tsy mila fibebahana aza Izy dia nanaiky kosa hiaraka sy hiray petsapetsa amin’ireo mpanota mibebaka.
Ny fankatoavan’ny Ray: « Raha vao niala avy tao anaty rano Izy, dia nahita ny lanitra nisokatra… ». Zava-mahagaga no niseho vokatr’izany rehetra izany: nisokatra ny lanitra, nidina ny Fanahy Masina, re ny feon’ny Ray avy any an-danitra manamafy ny maha Zanak’Andriamanitra Ray an’i Jesoa. Sady niara-nibebaka tamin’ireo mpanota i Jesoa no niserasera tamin’Andriamanitra Ray ihany koa. Zary lasa fifaneraseran’ny lanitra sy ny tany ny ranon’i Jordany. Ny Trinite Masina, Andriamanitra Ray Zanaka Fanahy Masina mihitsy no indro hita sy re. Zary lasa batemy fanambarana ny maha Zanak’Andriamanitra an’i Jesoa ilay batemim-pibebahana notorin’i Joany.
Ny fanosoran’ny Fanahy Masina: « … sy ny Fanahy Masina nidina tahaka ny voromailala, nankeo amboniny ». I Jesoa ilay hanao batemy amin’ny Fanahy Masina no voalohany natao batemy amin’ny Fanahy Masina. Santatry ny Batemy Kristianina sahady izany. Nidina nankeo amboniny ny Fanahy Masina. Nandray ny fanosoran’ny Fanahy Masina sy ny heriny Izy. Nidina tahaka ny voromailala ny Fanahy Masina. Mampahatsiahy Ilay Fanahy misonenika tambonin’ny rano talohan’ny nahariana izao tontolo izao izany (Jenezy 1, 1). Mova tsy Fahariana vaovao indray no santarina miaraka amin’i Jesoa natao batemy… Re ny feo avy any an-danitra; tsy feon’ny Mpahary intsony fa feon’ny Ray ihany koa manambara imasom-bahoaka fa ilay Jesoa avy any Nazareta, taizan’i Maria sy Josefa no Zanany malalany izay ankasitrahany indrindra.
Zanaka malalan’ny Ray i Jesoa. Nanaiky sy nanatanteraka ny sitrapon’ny Ray Izy. Tonga olombelona mba hiantso sy hitondra ny olombelona ho ao amin’ny Ray. Miantso ny olombelona àry Izy mba hanaiky sy hanatanteraka ny sitrapon’ny Ray. Ny fandraisana ny Batemy no santatra iombonana amin’i Jesoa Kristy Zanank’Andriamanitra. Ny tenin’ny Ray manambara an’i Jesoa ho “zanany malalany sy ankasitrahany” no miantefa ihany koa amin’izay rehetra vita Batemy. Zanaka malalan’Andrimanitra Ray sady ankasitrahany isika vita Batemy.
« Ry Jesoa, mpanala ny fahotan’izao tontolo izao, nietry tena hilahatra tamin’ny mpanota Ianao, koa mihanta aminao izahay, ampio hihaino ny teninao, mba ho zanaky ny Ray marina tokoa. »
Fanambaran'ny FFKM : Aoka ny rariny hikoriana... - il y a 50 minutes
Teny Mahavelona : « Mibebaha: Ny tarehy ratsy no tsy azo ovàna fa ny toetra ratsy azo ovàna » - il y a 5 jours
Teny Mahavelona : « Samy nantsoin’Andriamanitra tsirairay isika… » - il y a 10 jours